उनको प्रेम आज पनि चिसो झरनाजस्तै ताजा लाग्छ | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
मैले पहिलो हेराइमै झरना थापा (नायिका) लाई मन पराएको हुँ । किन मन पराएँ, थाहा छैन । बस् मन पराएँ । ‘लभ एट फर्स्ट साइट’ भनेको यस्तै होला ।[full-post]
यो २२ वर्ष पुरानो कथा हो । उनी पिके क्याम्पसमा आइए पढ्थिइन् । म साथीहरुको लहैलहैमा फिल्म निर्माता बन्न तम्सेको थिएँ । मेरो ब्यानरमा बन्न लागेको फिल्मका लागि हामी हिरोइन खोज्दै थियौं । ‘पिके क्याम्पसमा एउटी च्वाँक केटी छ’ भन्ने खबर कतैबाट हामीसम्म आइपुग्यो । उनको नाम झरना रहेछ । कति राम्रो नाम !
म, मेरो साथी उज्ववल पौडेल र निर्देशक रेशराज आचार्य उक्त च्वाँक केटीलाई हेर्न पिके पुग्यौं । उनी क्याम्पसमा थिइनन् । त्यहाँ नजिकै एउटा डान्स इन्स्टिच्युट रहेछ । उनी त्यहाँ केटाकेटीलाई डान्स सिकाउँदिरहिछन् । हामी त्यहीँ पुग्यौं । हामी पुग्दा उनी कम्मर मर्काइमर्काइ नाचिरहेकी थिइन् ।
हो, त्यहीँ हो मैले उनलाई पहिलोपटक देखेको । साँच्चै च्वाँक थिइन् । म पहिलो हेराईमै फिदा भएँ । उज्ज्वल र रेशराजले उनीसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो । म अलि वर बसेर उनलाई हेरिरहेँ । एकोहोरो हेरिरहेँ । एक छिनका लागि नशामा लठ्ठीए झैं भएँ । उनले भने मलाई बाल दिएकी थिइनन् ।
उज्ववल र रेशराज दाइले झरनालाई फिल्म खेल्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । उनले आनाकानी गरिन् । अलि कर गरेपछि ‘मेरो परिवारसँग कुरा गर्नुस्’ भन्ने जवाफ दिइन् । परिवारलाई अर्को दिन भेट्ने भनेर हामी छुट्टियौं । म उनीसँग एक शब्द पनि बोलिनँ । फर्किँदाखेरी मैले फेरि एकपटक उनलाई फर्केर हेरेँ । उनी कम्मर मर्काउन थालिसकेकी थिइन् ।
‘केटी त च्वाँक रहिछ नि,’ बाटोमा मैले उज्ज्वललाई भनेँ ।
‘चक्कर चलाउने हो त ?’ उज्ज्वलले यसो भन्दा मलाई चक्कर लागे झैं भयो ।
त्यो दिनभरी मेरो मानसपटलमा उनी छाइरहिन् । राति सिरानी च्यापेर झरनालाई सम्झिएँ । उनलाई आफ्नो फिल्मको हिरोइन बनाउनेभन्दा आफ्नो बनाउनेतर्फ मेरो सोचाइ बग्न थाल्यो ।
पीके अगाडि धर्ना
भोलिपल्ट हामी उनको परिवारलाई भेट्न पुग्यौं, कलाकार रमा थपलियाको घरमा । काम विशेषले उनी आफ्नो मामासँग त्यहाँ आएकी थिइन् । हामीलाई त्यहीँ भेट्न बोलाएपछि गयौं ।
उज्ववल र रेश दाइले झरना र उनका मामासँग गफ गर्नुभयो । म भने उनलाई हेरेर बसेँ । फेरि पनि म लठ्ठीएँ । फेरि पनि उनले मलाई बाल दिइनन् । र, फेरि पनि पनि मेरो उनीसँग बोलचाल भएन । हामी फर्कियौं ।
झरनाले फिल्ममा डेब्यु गर्ने लगभग तय भयो । तर, पछि गएर हामीले त्यो प्रोजेक्ट नै रद्द गर्‍यौं । विभिन्न कारणले फिल्म बनेन । तर, मलाई फिल्मको चस्का भने राम्रैसँग पस्यो ।
म गाडीको व्यवसाय गर्थेँ । मसँग थरीथरीका गाडी हुन्थे । आफुकहाँ भएका गाडी फेरि-फेरि चढ्ने गर्थेँ । म झरनालाई हेर्न गाडी लिएर पिके क्याम्पस धाउन थालेँ । गाडी पार्क गरेर उनी ओहोर दोहोर गर्ने ठाउँमा उभिन्थे । उनी साथीहरुसँग हिँड्थिन् । बाटो छेउ रहेको पसलमा तितौरा खान्थिन् । म उनलाई हेरेर एक छिन लठ्ठीन्थेँ र फर्किन्थेँ ।
एक दिन म गाडीबाट ओर्लेर तितौरा पसलमा बसेँ । उनी त्यहाँ आइन् । अचानक भेट भएको झैं गरी मैले सोधेँ, ‘के छ ? मलाई चिन्यौं ?’ उनले सम्झिइन् । यसरी हाम्रो बोलचाल सुरु भयो । म पीके क्याम्पस अगाडि ढुक्ने र उनलाई भेटेर गफ दिने गर्न थालेँ । उनका साथीहरुसँग पनि चिनजान भयो । म उनीहरु सबैलाई गाडीमा हालेर घुमाउन थालेँ । मैले झरनालाई मन पराउँछु भन्ने सबैले गेस गरिसकेका थिए ।
त्यतिबेला मोबाइल आएको थिएन । उनी मलाई क्याम्पसको युनियनबाट कहिलेकाहीँ फोन गर्थिन् । एकपटक म कामविशेषले बिराटनगर पुगेको थिएँ । उनले फोन गरिन् ।
‘दाइ, तपार्इलाई त मेरो साथीले कस्तो मन पराउँछे नि,’ उनले भनिन् ।
‘तर म त तिमीलाई मन पराउँछु,’ मैले भनिदिएँ । उनले झ्याप्पै फोन राखिन् । मैले कलब्याक गर्न खोज्दा फोन उठेन ।
खासले मेरो मन चोर्न खोजेकी रहिछन् । उनले खोजेजस्तै मैले आफ्नो प्रेमको स्वीकारोक्ति दिएँ । त्यसपछि हाम्रो अफेयर सुरु भयो । अफेयर चलेको तीन महिनामा बिहे नै भयो । तर, बिहे त्यति सजिलोसँग भएको थिएन ।
झरनालाई माग्न गोलचक्कर
झरना सानै थिइन्, केवल १६ वर्षकी । म पनि २२ वर्षको मात्रै थिएँ । तर, भाइले बिहे गरिसकेकाले मलाई पनि बिहे गर्न हतार थियो । एक दिन मैले झरनासँग बिहेको कुरा गरेँ ।
झरनाको घर प्युठान थियो । काठमाडौंको सिफलमा आमा र बहिनीसँग बस्दिरहिछन् । उनको बुवा र भाइ बुटबलमा बस्नुहुँदो रहेछ । झरनाले आफ्नो घरमा आएर आमासँग कुरा गर्न भनिन् ।
मैले घरमा बुवालाई आग्रह गरेँ । तर, बुवाले ‘आफैं कुरा गर’ भन्नुभो । त्यसपछि म उज्ज्वललाई लिएर उनको घरमा पुगेँ । आमासँग कुरा भयो । उहाँले प्रष्ट जवाफ दिन सक्नुभएन । ‘बाँसबारीमा मेरो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नुस्’ भन्नुभयो ।
उहाँका दाइ सेनाको मेजर हुनुहुँदो रहेछ । उहाँलाई भेट्न उज्ज्वललाई लिएर बाँसबारी पुगेँ । उहाँले पनि प्रष्ट जवाफ दिन सक्नुभएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘म परिवारको मान्छे परिनँ । झरनाका सानोबुवा सिफलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्दा फलदायी होला ।’
त्यसपछि उज्वललाई लिएर म सिफल पुगेँ । उहाँले पनि कुनै जवाफ दिन सक्नुभएन । ‘मैले भनेर हुँदैन, कुरा त उसको बुवाआमासँगै गर्नुपर्छ’ भनेर फर्काउनुभयो ।
त्यसको केही दिनमा झरनाका बुवा काठमाडौं आउनुभयो ।
सबैजनाले मेरो विषयमा कुरा निकाल्दा उहाँले मलाई छोरी दिन ठाडै इन्कार गर्नुभएछ । ‘पहिलो कुरा त छोरी सानै छे, दोस्रो कुरा मेरी छोरीको बिहे त आर्मीसँग हुन्छ,’ उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएछ । झरनाका सानोबुवा, मामा हजुरबुवा सबै आर्मीको जागिरे हुनुहुँदोरहेछ । झरनालाई पनि एउटा आर्मी केटाको कुरा आएको रहेछ । त्यसैले बुवाले मेरो नामै सुन्न चाहनुभएन ।
अनि भागी बिहे
मागी बिहे गर्ने भगिरथ प्रयास असफल भएपछि हामीले भागी बिहे गर्नुपर्ने भयो । झरनालाई कन्भिन्स गरेँ । र, एक दिन भगाएँ ।
भगाएर आफ्नो सानोममीको घरमा लगेँ । त्यहाँ सारा बन्दोबस्त मिलाएँ । बिहेका सामानहरु किनेँ । भोलिपल्ट दुलही बनाएर गुहेश्वरी लगेँ र बिहे गरेँ । बिहेमा उनकी बहिनी पनि आइन् । मेरो पट्टीबाट ३/४ जना हुनुहुन्थ्यो ।
बिहे गरेर घरमा भित्र्याइयो । उनका बुबाआमा हामीसँग रिसाउनुभयो । तीन महिनासम्म सम्पर्क भएन । एकदिन झरनाले आमाको साह्रै याद आयो भनिन् । मैले आमालाई गएर भेट्न सुझाव दिएँ । आफैंले गाडीमा लिएर गएँ । उनी घरमा पसिन् । म गाडीमै बसेँ । एकछिनमा आमा मलाई बोलाउन आउनुभो । त्यसपछि म पनि घरमा गएँ । हामी दुबैलाई ससम्मान टीका लगाइदिएर घरमा भित्र्याउनुभो । त्यसपछि सम्वन्ध सुमधुर भयो ।
बिहे गरेको ११ महिनामा नै छोरी जन्मिइन् । यति चाँडै बच्चा जन्माउने हाम्रो प्लानिङ थिएन । झरनाको आमा बन्ने उमेर पनि भएको थिएन । तर, असावधानीले गर्दा गर्भ बस्यो । त्यसपछि अर्को विकल्पमा जान मन लागेन ।
बाबुबन्दा मेरो उमेर अल्लारे नै थियो । ममा कुनै जिम्मेवारीबोध थिएन । झरना पनि त्यस्तै । बच्चाको सबै स्याहार सुसार आमाबुवाले गर्नुहुन्थ्यो । झरना क्याम्पस पढ्न जान्थिन् । म पनि काममै व्यस्त हुन्थेँ । बिहान-बेलुकी यसो खेलाउनेबाहेक हामी दुबैले छोरीलाई टाइम दिएनौं ।
धर्मसंकटले ल्यायो आर्थिक संकट
बिहेको डेढ वर्षपछि म फेरि फिल्म बनाउन भनेर तातेँ । रेश दाइकै निर्देशनमा धर्मसंकट फिल्म बनाउन सुरु गरियो ।
यसमा नायिका विपना थापा र जल शाह थिए । तर, सुटिङको अघिल्लो दिन आएर जल शाहले धोका दिइन् । उनले भ्याउँदिन भनेपछि अर्को नायिका खोज्नुपर्ने भयो । यत्तिकैमा नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘झरनालाई नै खेलाऔं न ।’
शुरुमा त मैले ठाडै अस्वीकार गरेँ । आमा भइसकेकी झरनालाई कसरी फिल्ममा नायिका बनाउने ? त्यसमाथि छोरी भर्खर डेढ वर्षकी भएकी थिइन् । तर, बसन्त दाइले निकै जोड गर्नुभयो । ‘झरनामा क्षमता छ, उनले सक्छिन्,’ उहाँलेे भन्नुभयो, ‘रोल पनि त लामो छैन । एउटा गीत र चारवटा सीन त हो नि ।’
अन्ततः म राजी भएँ । झरना पनि फिल्म खेल्न पाउँदा मख्ख परिन् । बिचरी उनलाई भित्रभित्रै फिल्म खेल्न रहर लागिरहेको रहेछ । दुधे बच्चालाई घरमा छोडेर हामी दुवै सुटिङमा हिँड्न थाल्यौं । धर्मसंकट फिल्म बनाउन मलाई निकै गाह्रो भयो । शिव श्रेष्ठ र राजेश हमाल दुई सुपरस्टारलाई लिएको थिएँ । उहाँहरु दुबैको टाइम सेड्युल मिलाउन गाह्रो पर्‍यो । सुटिङ सक्नै ६-७ महिना लाग्यो । फिल्मको बजेट पनि आकाशियो ।
फिल्म नचलेको होइन, चलेको हो । तर, मेरा हातमा १६-१७ लाख मात्रै पर्‍यो । करिब ६० लाख घाटा व्यहोरेँ । धर्मसंकट फिल्मले मलाई लगभग सडकमा ल्याइदियो । फिल्म बनाउने क्रममा बजेट बढ्दै गएपछि मैले आफूसँग भएका गाडी सबै बिक्री गरिदिएको थिएँ । अब न व्यवसाय छ, न हातमा पैसा । छोरीलाई बिस्कुट खुवाउनसमेत पैसा नहुने अवस्था आयो । त्यसपछि पहिलो फिल्ममा डुबेको पैसा उठाउने उद्देश्यले लागेँ दोस्रो फिल्म निर्माणमा ।
धर्मसंकटबाट आएको १६-१७ लाख र अलिकति ऋण-धन गरेर गोर्खाली बनाउन सुरु गरेँ । श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई हिरो र झरनालाई हिरोइन बनाएँ । यो फिल्म सानो बजेटमा तयार भयो ।
गोर्खालीले मलाई उकास्यो । ३०-३५ लाख नाफा निकालेँ । यो फिल्मको सफलताले मलाई निर्माताको रुपमा र झरनालाई हिरोइनका रुपमा स्थापित गरायो ।गोर्खालीको सफलतापछि झरनालाई बाहिरबाट लगातार अफरहरु आउन थाले । तर, बाहिरी ब्यानरका फिल्ममा उनलाई काम गराउने मेरो ध्येय थिएन । जति खेल्छिन्, आफ्नै फिल्ममा खेल्छिन् भन्ने मनसाय थियो । त्यसैले आएका अफरहरु उनले अस्वीकार गरिन् ।
यसैबीचमा मेरो पहिलेदेखिको साथी उज्वलले आफैं फिल्म बनाउने भयो । आफ्नो फिल्ममा झरनालाई नायिका बनाउन उसले मसँग प्रस्ताव राख्यो । मैले नाइँ भन्नै सकिनँ । यसरी पहिलोपटक उनले बाहिरी ब्यानरका फिल्ममा काम गरिन् ।
जीवनसाथीमा उनले गरेको अभिनयको धेरैले तारिफ गर्नुभयो । उनलाई अभिनयमै सक्रिय गराउन धेरै जनाको सुझाव पाएँ । तैपनि म तयार थिइँन । यत्तिकैमा एक दिन निर्देशक शिव रेग्मी एउटा फिल्मको स्क्रिप्ट लिएर मकहाँ आउनुभयो । स्क्रिप्ट मलाई खुबै मन पर्‍यो र त्यसमा फिल्म बनाउन तयार भएँ । नायिका झरनालाई नै लिएँ । फिल्म थियो ए मेरो हजुर ।
फिल्म निकै राम्रो बन्यो । तर, मेरो दुर्भाग्य, फिल्म रिलिज हुनेबेलामा संकटकाल लाग्यो । धेरै हलहरु बन्द भए । भएका हलहरुमा पनि एक-दुई शो मात्रै फिल्म चल्न थाले । थुप्रै फिल्महरु डब्बा भए । मैले भने त्यस्तो प्रतिकुलतामा पनि लगानी उठाएँ । यो फिल्मबाट म हिट निर्देशक र झरना हिट नायिकामा दरिइन् ।
०५३ सालमा खेलेको धर्मसंकटदेखि ०५७ सालमा रिलिज भएको ए मेरो हजुरसम्म आइपुग्दा झरनाले चारवटा मात्रै फिल्म खेलेकी थिइन् । अफरहरु धेरै आए पनि मैले नै उनलाई रोकेको थिएँ । तर, ए मेरो हजुरपछि त उनलाई रोक्ने अवस्था नै रहेन । त्यसपछि बाहिरका फिल्ममा पनि उनलाई खुला छोडिदिएँ । एकपछि अर्को फिल्म गर्दै सफलताको सिँढी उक्लिदै गइन् । एकताका सर्वाधिक व्यस्त नायिकाहरुमा उनको नाम अगाडि आउँथ्यो ।
झरना फिल्ममा, म घरमा
हाम्रो परिवारमा ०५८ सालतिर अंशबण्डा भयो । म छुट्टएिर श्रीमती र छोरीका साथ चाबहिलमा बस्न थालेँ । संयुक्त परिवारमा बस्दासम्म ममाथि कुनै जिम्मेवारी र दबाव थिएन । घर व्यवहारको काम केही पनि छुनुपर्दैनथ्यो । मैले छोरीको सिँगानधरी पुछ्नुपर्थेन ।
छुट्टएिपछि एकाएक सम्पूर्ण पारिवारिक जिम्मेवार आइपर्‍यो । झरना फिल्ममा व्यस्त भइसकेकी थिइन् । उनी कुनबेला कहाँ पुगेकी हुन्थिन् टुंगो थिएन । छोरीको सम्पूर्ण हेरचाह मैले गर्नुपर्‍यो । खुवाउने पियाउनेदेखि स्कुल पठाउनेसम्म सबै मैले गर्थेँ । १० वर्षकी भएपछि उनलाई होस्टेल राखिदिएँ । अहिले उनी इन्डियामा ब्याचलर पढ्दैछिन् ।
अर्को सन्तानको चाह
हाम्रो पहिलो सन्तान अनपेक्षित रुपमा भएको थियो । त्यतिबेला दुवै जना अपरिपक्व थियौं । त्यतिबेला न मैले एउटा पिता हुनुको आनन्द वोध गरेँ, न उनले आमा हुनुको ।
जब उमेर छिप्पिँदै गयो, अर्को सन्तानको चाह बढ्न थाल्यो । हामीले सोच्न थाल्यौं, अर्को सन्तान नभए भोलि हाम्री छोरी एक्ली पर्छिन् । उनले दुःखसुख सेयर गर्ने पनि कोही हुँदैन । आज हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी छन् र त परेका बेला सपोर्ट हुन्छ । चाडबाडमा रमाइलो हुन्छ । छोरीलाई पनि एउटा भाइ वा बहिनी दिनुपर्छ भन्ने दुबै जनालाई लागिरह्यो ।
तर, झरना आफ्नो करिअरको ‘पिक’मा थिइन् । त्यतिबेला छोरी जन्माउँदा उनको करिअरमा धक्का लाग्न सक्थ्यो र फेरि माथि उठ्न गाह्रो पथ्र्यो । त्यसैले हामीले अर्को सन्तानको योजनालाई पछि धकेल्दै गयौं । छोरी ठूली हुँदै गइन् ।
जब झरना अलिकति फुर्सदिली भइन्, छोरी निकै ठुली भइसकेकी थिइन् । छोरी यत्री भइसक्दा अर्को सन्तान पाउन उचित लागेन । त्यसैले अर्को सन्तानको चाहलाई हामीले मनमनै मार्‍यौं ।
हामीले बनाएको पछिल्लो फिल्म ‘फेसबुक’ फ्लप भयो । अहिले फेरि नयाँ फिल्म बनाउन अघि सरेको छु । यो ‘ए मेरो हजुर’को सिक्वेलका रुपमा बन्दैछ । यसै फिल्मबाट झरनालाई निर्देशकका रुपमा लञ्च गरेको छु ।
यो मेरो ‘लङ टर्म प्लान’ अन्तरगत हो । मैले उनलाई अब अभिनय छोडेर निर्देशनतर्फ मात्रै केन्द्रित हुन भनिरहेको छु । धेरै साथीहरुले मलाई सोध्छन्, ‘बुढीलाई अरु केटाहरुले बोकेको र म्वाइ खाएको देख्दा तँलाई औडाहा हुँदैन ?’ वास्तवमा मलाई त्यस्तो केही हुँदैन, किनकि मैले फिल्म इन्डष्ट्रीलाई बुझेको छु । अभिनय के हो भन्ने जानेको छु । मन फराकिलो बनाएको छु ।
झरनाले आजसम्म कुनै पनि फिल्ममा आपत्तिजनक सीन दिएकी छैनन् । अंगप्रदर्शन गरेकी छैनन् । उनी आफ्नो सीमाभित्र छिन् । कुनै पनि फिल्मको अफर आउँदा उनी मसँग छलफल गर्छिन् । म उनले ‘सोभर’ टाइपको भूमिकामा अभिनय गरेको हेर्न चाहन्छु । उनलाई यस्तै सुहाँउछ पनि ।
आपत्तिजनक दृश्यहरुकै कारण उनले कतिपय फिल्महरु रिजेक्ट गरेकी छिन् । मैले उनलाई यस्तो दृश्य गर, यस्तो नगर भनेर सम्झाउनै पर्दैन । उनी आफैं बुझि्छन् । मैले आफैं श्रीमतीलाई फिल्म लाइनमा लगाएको हुँ । आज मलाई झरनाको श्रीमान भनेर धेरैले चिन्छन् । श्रीमतीको नामबाट चिनिँदा मलाई कुनै हीनताबोध छैन । बरु गौरब लाग्छ । सँगै बाटो हिँड्दा उनलाई धेरैले चिन्छन्, मलाई कमैले चिन्छन् । त्यसमा मलाई कुनै अफसोच लाग्दैन ।
लुगा आफैं किनिदिन्छु
उनको ड्रेसअपको सवालमा म एकदमै उदार छु । उनले फेसनेबल ड्रेसअप गरेको नै मलाई मनपर्छ । कुर्ता-सुरुवाल लगाएको भन्दा स्कर्ट लगाएको नै मन पर्छ । किनकि उनलाई यस्तै सुहाउँछ ।
प्रायः उनको ड्रेसअप मैले नै च्वाइस गर्छु । बजारमा सँगै जाँदा मेरो रोजाइ हावी हुन्छ । उनको रोजाइ र मेरो रोजाइ प्रायः मिल्दैन । विशेष गरी लुगामा । तर, मैले कुनै लुगा किनिदिएर ल्यायो भने खुशी भएर लगाउँछिन् । म उनका लागि लुगा किन्न अभ्यस्त भइसकेको छु । बाहिर जाँदा उनका लागि ५-७ जोर लुगा बोकेर आउँछु ।
घरका व्यवहारिक कुराहरु झरनालाई केही थाहा हुँदैन । नुनदेखि सुनसम्म मैले नै किन्ने हो । उनले कमाएको पैसा सबै मलाई जिम्मा लगाउँछिन् । उनको कुन फिल्मबाट कति पैसा आयो र कुन फिल्मबाट आउन बाँकी छ भन्ने सबै हिसाब-किताब मेरो एकाउन्टेन्टसँग हुन्छ । उनलाई खर्च गर्ने पैसा मैले नै पर्समा राखिदिन्छु ।
पैसा उडाउन भने झरना खप्पिस छिन् । आमा-छोरी दुबैलाई पैसा जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना नै छैन । जे देख्यो, त्यही किन्नुपर्छ । चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो । आजसम्म दुवैजनाको डिमान्ड पुर्‍याएकै छु ।
असमझदारीहरु छन्, तर……
हामी दुईबीच असझदारीका घटनाहरु नभएका होइनन् । थुप्रै छन् । तर, दुबैजनाले एक कदम पछि हटेर ती असमझदारीलाई टुंग्याउन सफल भएका छौं । उनको कुरै नबुझी झनक्क रिसाउने बानी छ । त्यसैले ठाकठुक परिरहन्छ । तर, त्यस्तो ठाकठुकले सम्वन्ध झन् न्यानो बनाउँदोरहेछ ।
झरनासँग मेरो सहयात्रा २२ वर्ष पुरानो भइसक्यो । तर, आज पनि उनी त्यस्तै नयाँ लाग्छिन् । उनको प्रेम आज पनि चिसो झरना जस्तै ताजा लाग्छ । त्यही प्रेममा नुहाएर म हरेक दिन फ्रेस हुन्छु ।
Labels: entertainment interview